Sakafo very 10 kilao | Nutri Diet
Ny fihenan-danja mandritra ny 4 andro dia azo atao
Rehefa miomana isika mampihena lanja mila mandray fanapahan-kevitra tsara isika hahatratrarana ny tanjontsika fa tsy diso amin'ny dingana raisintsika. Satria tsy misy mahasosotra kokoa noho ny fiezahana mafy hihinana sakafo sy tsy hahatratra ny tanjontsika.
Tsy mora ny famoizana lanja, mitaky zavatra lehibe finiavana, fikirizana ary eo am-pelatanantsika ihany no hahatratrarana azy.
Tianay ny manampy anao amin'izany dingana izany amin'ny filazanao aminao izay sakafo tsara indrindra tokony harahinao sy ireo torohevitra izay tsy tokony hohadinoinao mampihena 10 kilao.
1 Torohevitra voalohany very 10 kilao
2 Sakafo very 10 kilao
2.2 Sakafo atoandro sy tsakitsaky
2.4 sakafo hariva
Torohevitra voalohany very 10 kilao
Ny lakileny araka ny efa noresahintsika dia ny maniry ny hihena, isika ihany no mahavita azy ary hahatratra izany amin'ny fahafoizan-tena, manova ny fahazarana mihinana ary amin'ny fomba fanao tsara.
Tsy mila maika isika na ny fiahiahy momba ny famoizana lanja dia hisy fiatraikany ara-tsaina io ary tsy ho afaka hifantoka aminy isika.
Tokony hataontsika very lanja amin'ny tenantsika Ary isaky ny mila izany isika, tsy hoe satria misy antoko fahatelo milaza amintsika na manome sosokevitra azy.
Ny filamatra dia ny famoahana lanja amin'ny antsasaky ny kilao isan-kerinandro, 2 kilao isam-bolana. Na izany aza, arakaraka ny karazan-tsakafo sy ny fangatahana, dia mety hahita sakafo mampihena 1 kilao isan-kerinandro isika. Tsy tokony hihoatra ny 1 kilao isan-kerinandro isika.
Tokony hanana saina misokatra ianao ary fantaro fa mba hahavery ny lanja dia tsy maintsy manova mandritra ny vanim-potoana fotsiny ianao, fa manova ny fahazarana azonao nandritra ny androm-piainanao.
Mila manisy marika ny tenanao ianao tanjona azo tanterahina ary sakafo izay azonao atao.
Tsy maintsy mihinana ny zava-drehetra amin'ny ampahany kely kokoa ianao, tandremo ny habetsahana sy ny fomba fahandroana ireo sakafo ireo.
Ny lalàna momba ny fihenan-danja dia tsotra: mila mampiditra kaloria kely kokoa ao amin'ny vatana isika mihoatra ny lanintsika, ka raha mandoro kaloria 2000 isan'andro isika, raha mampiditra 1.300 dia hihena isika.
Ny fahaverezan'ny lanja dia midika bebe kokoa noho ny famoizana lanja, izy io dia mitarika fomba fiaina salama ary mahatsapa tsara ny tenanao. Manàna angovo bebe kokoa, fahavelomana ary fahatokisan-tena bebe kokoa izay azo adika amin'ny fomba tsara sy fihetsika tsara manoloana ny fiainana.
Tianay ny mizara sakafo ho anao izay hahatonga anao ho very 10 kilao ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Samy hafa ny olona tsirairay ary ny fomba fiainana na ny toe-javatra tsirairay avy dia hahatonga ny vatana hihena amin'ny taha iray.
ny Sakafo maivana avela amin'ity sakafo ity ireto manaraka ireto:
Kafe misy ronono skim.
Kafe misy ronono legioma.
Fanosehana na dite hanandrana mamy miaraka amin'ny zava-mamy voajanahary.
Soso-mofo vita amin'ny varimbazaha manontolo miaraka amina vorontsiloza ary fromazy vaovao.
Toast varika manontolo ary atody iray ary omelette frantsay fotsy roa.
Tavoahangy skim sy veromanitra 30 grama.
Sombin-voankazo sy yaourt skim.
Biscuits mofo feno roa miaraka amin'ny menaka oliva virjiny fanampiny.
Sakafo atoandro sy tsakitsaky
sakafo y tsakitsaky safidy:
Kafe misy ronono vita amin'ny ronono na ronono legioma, fampidirana na dite mamy amin'ny zava-mamy voajanahary.
Sombin-voankazo amina vanim-potoana sy voanjo voajanahary vitsivitsy.
Yaourt skimmed miaraka amin'ny voanjo.
Fihetsiketsehana mofo sy turkey roa.
Mofom-bary manontolo sy avokado antsasaky ny.
Different sakafo mitambatra araka izay tadiavinao:
Voaro nohosorana hena voatoto, akoho antsasaky ny akoho ary antsasaky ny akoho, voatoto amin'ny voatabia voajanahary sy gratin miaraka amin'ny fromazy maivana.
Nasiana menaka sy tongolo lay ary persily ny sarda Swiss na epinara. Ny ampahefatry ny akoho tsy namboarina natsiro zava-manitra sy voasarimakirana.
Zucchini sy crème leek misy fromazy maivana. Burger turkey voatono.
Voay nopetahany henan'akoho sy henan'omby mifangaro mifangaro ary tongolo namboarina.
Amboarina ao an-trano feno, miaraka amina ampahan-trondro, ron-kena tsy voadio, tapa-kena kely ary saosisy kely.
Salady mafana amin'ny lettuces isan-karazany, voatabia serizy, kapoakan'ny tuna voajanahary sy surimi. Akanjo solika, vinaingitra ary sira, fa tsy atao be loatra.
Holatra miaraka amin'ny cubes ham Iberia, steak hen'omby nofaina miaraka amin'ny voanio Dijon.
samy hafa fiaraha-misakafo mamorona ny menio isan'andro:
Sotrana legioma, silaka roa amin'ny hena Iberiana. Tetezamita voatono miaraka amin'ny tongolo lay sy persily. Ho an'ny tsindrin-tsakafo iray sôkôla madio madio.
Soa hena an-trano, savony Iberiana roa ary canela vita amin'ny tuna voafafa tsara ao anaty menaka oliva. Sôkôla mainty madio iray grama.
Sotrok'akoho, miaraka amin'ny vorontsiloza voaendy 100 gr miaraka amin'ny paprika ary menaka oliva virjiny fanampiny. Aokely sôkôla madio ho an'ny tsindrin-tsakafo.
Lasopy legioma. Hama Iberiana 30 grama sy amina amperora voatono. Sôkôla mainty, iray grama.
Sakafo hena an-trano, vorontsiloza roa ary tapa-kazo 5. Aôkôly sôkôla madio, ho tsakitsaky farany.
Lovia misy ron-kena vita an-trano, na legioma na hena, ary trondro namboarina na namboarina, ranomasina, bream an-dranomasina na akoho. Sôkôla madio iray grama.
Soa legioma, slam-boankazo Iberiana roa, horita 100 grama, horita, voamaina ary oliva fotsifotsy. Aôkôly sôkôla madio ho an'ny tsindrin-tsakafo.
Ity sakafo ity dia torolàlana sy safidy mahasalama fotsiny hanombohana mampihena ny lanjany. Hiankina amin'ilay olona hoe firy kilao no mety hampihena ny lanjany. Raha te hihena miaraka amin'ny fahasalamana ianao dia mifandraisa amin'ny GP hitarika anao amin'ny fizotranao amin'ny fihenan-danja. Ny zava-dehibe dia ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo very 10 kilao